EN - EnglishZH - 中文(简体)VN - VietnamAR - العربيةKH - CambodiaAM - Amharic
ပင်မစာမျက်နှာကျန်းမာရေးအချက်အလက်စက်တင်ဘာလ 2019Colonoscopy’s Leading Role in Cancer Prevention & Early Detection
մարտի 19, 2021 ကင်ဆာရောဂါလိပ်ခေါင်းရောဂါအူမကြီးကင်ဆာအူမကြီးဆေးခြင်းအူမကြီးမှန်ပြောင်း
အူမကြီးနှင့် အစာဟောင်းအိမ်ကင်ဆာ(ခေါ်)အူမကြီးကင်ဆာသည် ကမ္ဘာတဝန်းလုံးတွင် တတိယ အဖြစ်များဆုံးသော ရောဂါဖြစ်ပြီး၊ ကင်ဆာကြောင့် သေဆုံးမှုနူန်းတွင် စတုတ္ထဦးဆောင်နေပါသည်။ ၂၀၃၀ တွင် ရောဂါ ဖြစ်ပွားမှုအသစ်သည် ၆၀ ရာခိုင်နှုန်း၊ တစ်နှစ်လျှင် ၂ သန်းကျော် ထိ တိုးပွားလာမည်ဟု ခန့်မှန်းထားပြီး၊ ရောဂါကြောင့် သေဆုံးသူ ဦးရေမှာ နှစ်စဉ် ၁.၁ သန်း ထိရောက်ရှိမည်ဟုလည်း ခန့်မှန်းထားပါသည်။
ပုံမှန်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်း၊ အူမကြီးမှန်ပြောင်းကြည့်ခြင်းအပါအဝင်၊ အူမကြီးကင်ဆာအား ကာကွယ်ရန်နှင့် အစောပိုင်းအဆင့်ကိုသိရှိရန် အဓိကကျသော အခန်းကဏ္ဍတခုစစ်ဆေးမှုသည် ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးသော အူမကြီးကင်ဆာကြောင့်သေဆုံးမှုကို ကာကွယ်နိုင်ကြောင်း ခန့်မှန်းထားပါသည်။ အူမကြီးမှန်ပြောင်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့် အခြား အူမကြီးကင်ဆာစစ်ဆေးမှုများ များပြားလာသည့် နိုင်ငံများတွင် အူမကြီးကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုနှုန်းကျဆင်းလာသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
အူမကြီးကင်ဆာကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းနှင့် အစောပိုင်းရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းတွင် အူမကြီးမှန်ပြောင်းစစ်ဆေးခြင်း၏ ဦးဆောင်အခန်းကဏ္ဍ အချက် ၅ ချက်ကို အောက်ပါတွင် ရှင်းပြပါမည်။
၁. ရောဂါအားအစောပိုင်းတွင်တွေ့ရှိခြင်းကြောင့် အသက်ရှင်နေထိုင်မှုတွင် ရရှိနိုင်သောကောင်းကျိူးများ
အူမကြီးကင်ဆာသည် အစောပိုင်းတွေ့ရှိ ကုသပါက ကုသပျောက်ကင်းနိုင်၍ အသက်ရှင်နူန်း မြင့်သော ရောဂါဖြစ်ပါသည်။ ရောဂါအားအစောပိုင်းရှာဖွေတွေ့ရှိမှု၏ စိန်ခေါ်မှုမှာ အူမကြီးကင်ဆာသည် နောက်ဆုံးအဆင့်သို့မရောက်မချင်း ရောဂါလက္ခဏာမပြပဲ နှေးကွေးစွာ ကြီးထွား လျက်ရှိပါသည်။ ထိုအဆင့်တွင် အမျိုးသမီး/အမျိုးသား တို့တွင် ခံစားရသော အူမကြီး ကင်ဆာရောဂါလက္ခဏာများမှာ…
၂. အူမကြီးမှန်ပြောင်းစစ်ဆေးခြင်းသည် စံချိန်စံညွှန်းမှီသော ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးချက်များ
အူမကြီးမှန်ပြောင်းစစ်ဆေးခြင်းသည် အူမကြီးကင်ဆာအတွက် အရေးပါဆုံးသော စစ်ဆေးမှုဖြစ်ပါသည်။ အူမကြီး ကင်ဆာစစ်ဆေးမှုနည်းလမ်းဖြစ်သော အူမကြီးမှန်ပြောင်းစစ်ဆေးမှု သည် သေဆုံးမှုနှုန်းကိုအနိမ့်ဆုံးလျော့ချခြင်းနှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ အူမကြီးမှန်ပြောင်းစစ်ဆေးမှုအပြင် ကင်ဆာအသားပိုများကို စစ်ဆေးရန် ကန့်သတ်ချက်ရှိနိုင်သော အခြားစစ်ဆေးမှုများစွာလည်းရှိပါသည်။ ရွေးချယ်စရာများမှာ-
Sigmoidoscopy အူမကြီးအောက်ဖက်မှန်ပြောင်းစစ်ဆေးခြင်းသည် ဆရာဝန်မှ ပုံမှန် အူမကြီးမှန်ပြောင်းထက်သေးငယ်ပြီး အလျားတိုသော ပြွန်ကို စအိုမှ အူမကြီးအောက်ဖက်ကို ထည့်သွင်းကာ အသားပိုများ၊ ပုံမမှန်မှုများ နှင့် ကင်ဆာစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်သည့် စစ်ဆေးမှုဖြစ်ပါသည်။ ဤနည်းလမ်းအားဖြင့် ဆရာဝန်သည် ပုံမမှန်သည့် အသားပိုများကို ဖြတ်ထုတ်ပြီး အသားစ ယူစစ်ပါသည်။ Sigmoidoscopy အူမကြီးအောက်ဖက်မှန်ပြောင်းစစ်ဆေးခြင်းသည် colonoscopy အူမကြီးမှန်ပြောင်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့် နိုင်းယှဉ်ပါက ကင်ဆာကြောင့် သေဆုံးမှုနူန်းလျော့ချနိုင်မှု အနည်းငယ် ပိုမိုကျဆင်းကြောင်းတွေ့ရပါသည်။
Fecal Occult Blood Testing (FOBT) ဝမ်းတွင်သွေးပါခြင်းကိုစစ်ဆေးခြင်းဖြင့် အသားပို (သို့) ကင်ဆာဆဲလ် ရှိမရှိ စစ်ဆေးပါသည်။ ဆရာဝန်များသည် (FOBT ) ဝမ်းတွင်သွေးပါခြင်းရှိမရှိ စစ်ဆေးမှုကို နှစ်စဉ် စစ်ဆေးရန် အကြံပြုလေ့ရှိပါသည်၊ ထိုစစ်ဆေးမှုသည် တစ်စုံတစ်ဦး၏ အူမကြီးကင်ဆာကြောင့်သေဆုံးမှုကို လျော့ချနိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိပါသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့် ၂နှစ် ၁ ကြိမ် FOBTစစ်ဆေးမှုသည် အူမကြီးကင်ဆာကြောင့် သေဆုံးမှုနူန်း အသင့်တင့်လျှော့ချနိုင်ပါသည်။
၃. အူမကြီးမှန်ပြောင်းစစ်ဆေးခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက် ၂ ခု
အခြားအူမကြီးကင်ဆာစစ်ဆေးမှုဖြစ်သော ဥပမာ အူမကြီအား CT ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်းနှင့် ဝမ်းစစ်ခြင်း တို့နှင့်မတူ အူမကြီးမှန်ပြောင်းစစ်ဆေးမှုသည် အသားပိုများ နှင့် ပုံမှန်မဟုတ်သောတစ်သျှူးကြီးထွားမှု တို့ကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်ရာတွင် အလွန်တိကျသော
ရောဂါရှာသည့် ပထမဦးဆုံးစစ်ဆေး မှု တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အူမကြီးမှန်ပြောင်းစစ်ဆေးနေစဉ်အတောတွင်းတွင် အကယ်၍ အသားပိုတစ်ခု တွေ့ရှိပါက ဒုတိယရည်ရွယ်ချက်အနေဖြင့်၀ိုင်ယာကြိုးကွင်းဆက်ကိရိယာကို မှန်ပြောင်းအတွင်းသို့ ထည့်ပြီး (polypectomy) အသားပိုကို ချက်ချင်းဖြတ်ထုတ်ပေးပါသည်။.
ပုံမှန်အားဖြင့် အူမကြီးမှန်ပြောင်းစစ်ဆေးနေစဉ် ကင်ဆာအစောပိုင်းအဆင့်ကြိီးထွားလျှက်ရှိ သောအရာများ တွေ့ရှိပါက ဖယ်ရှားပစ်နိုင်ပါသည်။ ကင်ဆာတစ်သျှူးများအောင်မြင်စွာ ဖယ်ရှားနိုင်ပါက လူနာသည် ကီမိုဆေးဝါးများဖြင့်ကုသခြင်းများ (သို့) ဓာတ်ရောင်ခြည်ပေးကုသခြင်း တို့မလိုအပ်ပါ၊ ပုံမှန်စစ်ဆေးမှုအနေဖြင့် ရောဂါလက္ခဏာပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့် ပြန်ဖြစ်ခြင်းရှိမရှိ အူမကြီးမှန်ပြောင်းစစ်ဆေးမှုအား ၆ လမှ ၁ နှစ် ဝန်းကျင်တွင် ထပ်မံစစ်ဆေးရန်လိုအပ်ပါသည်။
၄. အူမကြီးကင်ဆာသည် အများအားဖြင့် သာမန် အသားပိုများမှ စတင်ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။
အချို့သော အသားပိုများသည် အများအားဖြင့် ရိုးရိုးသာမန် များသာဖြစ်ကြပြီး ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေ နည်းပါသည်။ အခြားသော အသားပိုအမျိုးအစားများမျာမူ ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေမြင့်ပြီး ကင်ဆာအမျိုးအစားမှာ ကင်ဆာအစပျိုးခြင်း (သို့) Adenomas ဟုခေါ်ပါသည်။ အသားပိုးအများစုသည် နောက်ဆုံး၌ကင်ဆာအဖြစ် မပြောင်းလဲသော်ငြားလည်း ၊ အူမကြီးကင်ဆာ အားလုံးနီးပါးသည် အသားပိုများကြောင့်ဖြစ်သည်။ အချို့သော လူများသည် အူမကြီးအသားပိုနှင့်ပတ်သက်၍ မျိုးရိုးဗီဇအလိုက် ရှိတတ်ကြပြီး၊ အခြားသောသူများသည် နေထိုင်မှုဘဝပုံစံ၊ နာတာရှည်
ကျန်းမာရေးပြသနာများ နှင့် အကြောင်းရင်းမသိသော အရာများကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ အူမကြီးမှန်ပြောင်းစစ်ဆေးခြင်းသည် အူမကြီးကင်ဆာစစ်ဆေးသိရှိရန် နှင့် အသားပို ( ကင်ဆာအစပျိုးအသားပိုများ) တို့ကိုဖယ်ထုတ်ခြင်း တို့ကို ပြုလုပ်ရန် ရွေးချယ်စစ်ဆေး နိုင်သည့် နည်းလမ်းဖြစ်သည်။
၅. အရေးပေါ်အလေးထားရန်လိုအပ်သည့် အချက်ပြ လက္ခဏာများကို သတိပြုပါ။
သေချာသော လက္ခဏာများ၊ အချက်ပြ လက္ခဏာများသည်အရေးပေါ် ဆေးကုသမှု ခံယူရန် လိုအပ်သည် ကြီးမားသော အခြေအနေတရပ် ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ထိုအရာများမှာ စအိုမှသွေးထွက်ခြင်း၊ ဝမ်းဗိုက်အဆက်မပြတ်နာကျင်ခြင်းနှင့် မအီမသာဖြစ်ခြင်းတို့သည် မသက်သာနိုင်ခြင်း၊ မရည်ရွယ်မရှိ အကြောင်းရင်းမသိ ကိုယ်အလေးချိန် ၁၀ ပေါင်နှင့် အထက် ကျသွားခြင်း၊ ပုံမှန် ဝမ်းသွားနေကျအတိုင်းမဟုတ် ဝမ်းမမှန်ဖြစ်ခြင်း (ဥပမာ- ပုံမှန် အလေ့အထ၂ ရက် ၃ ရက်မှ သည် ၄ ရက် ၅ ရက် သို့ ပြောင်းသွားခြင်း) တို့ပါဝင်ပါသည်။
အသက် ၅၀ ဝန်းကျင်ရှိ အူမကြီးကင်ဆာရောဂါအန္ကရာယ်အတိအကျမရှိသော အမျိုးသား/သမီး တိုင်းသည် အူမကြီးမှန်ပြောင်းစစ်ဆေးသင့်ပါသည်။ အကယ်၍သင်၏မိသားစုဝင်၌ ကင်ဆာမျိုးရိုး၊ (သို့) အခြား အူမကြီးကင်ဆာ ၊ အစာဟောင်းအိမ်ကင်ဆာ ဖြစ်လာနိုင်သော အန္ကရာယ် ရှိပါက၊ အသက် ၄၀ ဝန်းကျင်တွင် အူမကြီးမှန်ပြောင်းစစ်ဆေး ပြုလုပ်ရန် အကြံပြုပါသည်။ အကယ်၍ စစ်ဆေးမှုမှ အသားပိုများ (သို့) ကင်ဆာအစပျိုးအညွန်းကိန်းပြ မရှိပါက၊ နောက် ၅ နှစ် (သို့) ၁၀ နှစ်အတွင်း ဆရာဝန်ညွန်ကြားချက် အတိုင်း ပြန်လည်စစ်ဆေးရန် အကြံပြုပါသည်။ အကယ်၍ စစ်ဆေးရန် (သို့) မည်သည့်အချိန်တွင် အူမကြီးမှန်ပြောင်း စစ်ဆေးရမည်ကို မေးမြန်းလိုပါက သင်၏ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
Dr. Veerakit Apiratprachasin,အစာအိမ်နှင့် အူလမ်းကြောင်းအထူးကု၊ အသဲအထူးကု၊
အစာအိမ်နှင့် အူလမ်းကြောင်းဌာန၊ ဘမ်ရွန်ဂရက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆေးရုံ။